Inona no kalitao?
1) Fitaovana finday: hiantohana ny fitombanan'ny rafitra, ny lohan'ny laser, solomaso, motera ary solomaso fanamafisam-peo dia marika malaza toa an'i Sony, Panasonic, HITACHI;
2) fampisehoana LCD: LCD tany am-boalohany tsy misy pentina na pixel maty;
3) Fampidiran-drano: Mba hahazoana antoka fa mifandray tsara ny FPC.
4) Fanaraha-maso kalitao: fitsapana vokatra semi-vita, alohan'ny handoroana azy, aorian'ny fahaterahana, QC, QA, fanaraha-maso ataon'ny orinasa.
5) Fitsapana: fahatairana, mari-pana ambony, mari-pana ambany, fidinana sns
Mandra-pahoviana ny fiantohana?
Ny vokatra rehetra dia omena serivisy fiantohana herintaona. Mifandraisa amin'ny varotra ary avereno ilay singa miaraka amina endrika fampodiana RMA sy RMA NO. Hamboarinay ho anao izany. (Afa-tsy ireo antony noforonin'olombelona)
Ahoana raha tsy mandeha ilay singa vaovao aorian'ny fametrahana azy?
Voalohany, azonao atao ny mifandray amin'ny varotra hanamafisana raha marina ny fametrahana sy ny fifandraisana; Faharoa, raha tsy maninona ny dingana voalohany, dia mba omeo antsipiriany misimisy kokoa izahay, omeo horonantsary raha ilaina; Fahatelo, hitatitra ny olana any amin'ny Departemantan'ny Teknolojia izahay hanome vahaolana; Fahefatra, raha mbola mijanona ho simba ilay singa, dia mifandraisa amin'ny varotra ary avereno amin'ny foibe fanamboarana ireo vokatra miaraka amina endrika RMA .fiverina sy RMA.NO (Afa-tsy ireo antony noforonin'olombelona)
Azoko atao ve ny mivarotra na mampandeha ny orinasanao?
Eny, tongasoa anao hifandray aminay raha mila antsipiriany bebe kokoa.
Manohana ny TT, Western Union, carte de crédit izahay. Azonao atao ihany koa ny mandefa vola amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola an-tserasera mivantana, mandritra izany fotoana izany, ny orinasanay dia manohana ny fiantohana ara-barotra, izay 100% kalitao amin'ny famokarana / shippment / fiarovana amin'ny fandoavam-potoana.